Sina Ny milina mitrandraka avo lenta 180 degre mpanamboatra milina famolavolana sy mpamatsy | dingana
Ny milina Leap mavesatra pl ...
Mitsambikina milina haingam-pandeha d ...
Andian-dahatsoratra milina-ZHDB ...
Mitsambikina milina haingam-pandeha ...
Ny milina Leap Machines milina fitetezana 180 degre
Ny milina Leap Machines mavesatra lozisialy 180 degre dia ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny asa 180 degre amin'ny tsipika famokarana, izay azo ampiasaina ho azy.
Mety amin'ny sanganasa samihafa izy io ary azo ampanjifaina mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Ny fuselage dia mifamatotra amin'ny vy mahazatra iraisam-pirenena. Ny rafitra dia mafy orina sy milamina. Ny milina Leap Machines mavesatra lozisialy 180 degre dia voahodina miaraka amina milina fitotoana gantry lehibe hahazoana antoka ny fisaka sy ny fitovizany; Rehefa mandeha ny fitaovana dia miorim-paka sy milamina ny fitodihan'ny takelaka. Ny milina mihodina dia mandray ny firafitry ny clamping afovoan'ny varingarin'ny rivotra na varingarina solika, izay afaka miantoka ny fifanandrinan'ny afovoan-gravitry ny lovia sy ny afovoan'ilay milina mihodina, mampihena ny herin'ny fiantraikany mandritra ny fihodinana, milamina sy azo antoka ary ary ahenao ny ratra amin'ny lovia. Ny milina Leap Machines mavesatra lozisialy 180 degre dia mampiasa rafitra fiarovana mekanika sy herinaratra roa mba hiantohana ny fiarovana ireo fitaovana, ary mandray ny rafitra fanaraha-maso manan-tsaina PLC, efijery mahasarika olona-milina interface. Ny milina Leap Machines mavesatra 180 degre dia afaka mampihena ny asa mandritra ny fampiasana azy, misoroka ny fahasimban'ny lovia amin'ny fizotran'ny asa, mampihena ny hamafin'ny asa, manatsara ny fahombiazan'ny asa, ary miasa soa aman-tsara. Izy io dia fitaovana mifanentana ilaina amin'ny famokarana mandeha ho azy ny gorodona, fanaka tontonana ary mpanamboatra lovia hafa.
Ny milina fikosoham-bary Gantry, fohy ho an'ny milina fikosoham-bary Gantry, dia milina fitotoam-bolo misy bàry gantry sy fandriana lava mitsivalana. Ny milina fanodinana Gantry dia azo ampiasaina hanodinana ny tampon'ny fanapahana fikosoham-bary miaraka amin'izay, ny fahamendrehana fanodinana sy ny fahombiazan'ny famokarana dia avo lenta, mety amin'ny fanodinana ny andiam-pamokarana sy ny famokarana masinina fiaramanidina asa-midadasika. Ny milina fitotoana gantry CNC dia afaka manodina ny habakabaka sy faritra manokana sasany koa.
Ny fisehoan'ny milina fanodinana Gantry dia mitovy amin'ny planer Gantry, ny mahasamihafa azy dia ny forongony sy ny tsangany dia tsy ny mpitondra fitaovana planer fa ny mpamaky fanapahana fikosoham-bary miaraka amin'ny tahiry ary ny fihetsika mifamaly amin'ny latabatra lava-pitombenan'ny Gantry ny milina fikosoham-bary dia tsy ny fihetsehana lehibe, fa ny fihetsiky ny fahanana, ary ny fihodinan'ny fanapahana fikosoham-bary no tena mihetsika.
Hafainganana ≤ 8 / fihodinana / min
Ahodina ny herin'ny maotera 3kW
Môtô mpampita 0.55kW
Haben'ny gorodona （） Halavany 600 ～ 1850 mm
980-1300mm ny sakany
150 ～ 250 mm ny sakany
Teo aloha: Ny milina fametahana pallet milina
Fihetsiketsehana haingana amin'ny milina avo lenta ...
Mitsambikina milina haingam-pandeha avo lenta ...
Mitsambikina milina-ZHDB andiana haingam-pandeha avo ...
Mitsambikina milina haingam-pandeha avo toerana avo roa heny ...
Ilay robot Leap Machines palletizing
Ny milina Leap haingana haingana lovia kely manan-tsaina ...